Ciidamada huwanta dalka Ciraaq oo isku dayaya inay kooxaha IS kalawareegaan magaalada Talacfar oo ah meesha kaliya ee ku hadhay gacanta kooxahaasi | Baadiye Media Center
Ciidamada huwanta dalka Ciraaq oo isku dayaya inay kooxaha IS kalawareegaan magaalada Talacfar oo ah meesha kaliya ee ku hadhay gacanta kooxahaasi
Talacfar (BMC)-Ciidamada huwanta ah oo ka hawlgala dalka burburay ee Ciraaq ayaa isku dayeya inay kooxaha Dawladda Islaamka xoogg kagala wareegaan gacan ku haynta magaaladaasi. ciidamada huwanta ah oo ka kooban dalalkii Maraykanku horkacayey ee ku soo duulay dalka Cirqaar 1- May sanadkii 2003 wakhtigaasoo dagaal dheer oo dad badani ku dhinteen ka dib ay ciidamadaasi huwanta ahi ku guuleeyseen inay xukunka ka tuuraan Madaxweynihii hore Sadaam Xuseen oo ah nin loo aqoonsaday Geesigii Carbeed.
dhawr-bilood ka dib ayey ciidamada huwnatu kooxahaasi kala wareegeen magaalada 2-aad ee dalka Ciraaq ugu weyn ee Mowsil oo ay muddo gacanta ku hayeen maamulkeeda kooxahaasi waxaana ku dhintay dad ay tiradooda ilaahay uun u xisaabsantahay iyadoo ay sidookale dad aan tiradooda la garayani ka carareen balaayada iyo Baaska lagu garaacayey goobaha ay ku noolyihiin dadkii ku noolaa magaaladaasi.
hadda oo ay u muuqdaan kooxaha isku magacaabay Dawladda Islaamku inay sii wiiqmayaan isla markaana looga itaal roonaaday dhulkii ay maamulaayeen ee magaalooyinka Ciraaq ayey markale ciidamada huwanta ahi isku soo habar wacdeen inay xididada u siibaan kooxahaasi IS waxaanay dagaal naxariis darro ah jahooyin kaladuwan kaga soo qaadeen magaalada TALACFAR oo ahayd fadhiisimadii ku hadhay gacantooda.
hubka waaweyn iyo diyaaradaha dagaalka ayaa ku waabariistay habeen 3-aad xili ay caruuraha iyo dadka waayeelka ahiba sariirta boobeen, kooxa IS ayaa iyana dhinacooda weeraradaasi kaga jawaabay iska caabin xoogg leh oo aanay huwantu filayn waxaanay dadkii magaalada daganaa u kala carareen hadba meeshay nafta amaankeeda bidayeen waxaanay magaaladii u qaybsantay hoog iyo halaagg.
saraakiisha horkacaya ciidamada dagaalka ayaa sheegay inay wali magaalada ku suganyihiin dagaalyahano farabadan oo gaadhaya ilaa 600 oo naftood hurayaal ah oo isu dhigaya madaafiicda kuwaasoo ay ka yaabeen qar iska xoornimadooda waxaanay labada dhinacba wali isku garaacayaan madaafiic iyo balaayo aan la garanayn.